विशेष खोज के हो? - विशेष खोजहरू
घर » विशेष खोज सम्पत्ति के हो?
के तपाईं एक विशेष घर खोज्दै हुनुहुन्छ?
तपाईं त्यहाँ त्यहाँ यो बाहिर जान्नुहुन्छ र तपाईंले यो देख्नुहुनेछ जब तपाईं यो थाहा पाउनुहुनेछ।
मलाई थाहा छ कि घर-खरीदारको रूपमा मेरो अनुभव थियो। मैले वर्णन गर्न सकेन कि म के गरूँ, किनकि मैले यो हेर्न सक्दिन, तर मलाई निश्चित थियो कि म असामान्य कुरा चाहन्छु। म केहि फरक खोज्दै थिएँ - केहि कुरा जसले मानक वर्गीकरणको रक्षा गर्यो।
मेरो निराशा सम्झँदा मलाई कस्तो लाग्यो "गुणहरु को लागि अद्वितीय चरित्र को गुण को बाहिर केहि केहि को चयन ", जब 1995 मा मेरो अचल सम्पत्ति कार्यालय खोल्नुहोस.
एक विशेष खोज सम्पत्ति सामान्य वर्गीकरण को रक्षा गर्दछ।
यो महंगा हुनु हुँदैन
यो उत्कृष्ट अवस्था राम्रो हुन सक्छ
यो दुर्लभ वा खोज्न गाह्रो हुन्छ
यसमा यसको आफ्नै दृश्य दृश्य हुन सक्छ
यो प्रायः एक अनन्य गृह लेआउट छ
यो यसको सेटिङ वा यसको दृश्यहरूको कारण मात्र, अद्वितीय हुन सक्छ
यो एक प्राचीन घर, एक देश खेती घर वा एक क्षेत्रीय सम्पत्ति हुन सक्छ
हरेक सम्पत्तिमा मैले स्वामित्व पाएको छु। विशेष खोजी गरिएको छ, हडसन नदीमा क्रोटन-ऑन-हडसन, न्यू यर्क, हेन्डसनसनविल, नेकपा-माओवादीका एक घरको अवलोकनमा एक पत्थर गेटहाउसबाट इङ्गल्याण्डमा एम्बेडेड रङहरू ।
यदि तपाइँ एक विशेष खोजी खोज्दै हुनुहुन्छ वा आफ्नो मालिकलाई नयाँ मालिकमा बदल्न को लागी तयार हुनुहुन्छ जुन तपाईले गरे जस्तै यसलाई जोगाउनुहुनेछ, कृपया स्पर्श मा प्राप्त। हामी सहयोग गर्न चाहन्छौं।